‘आर्थिक भारले डिप्रेशनमा पुगेँ’ - Malayakhabar
होम पेज अन्तर्वार्ता ‘आर्थिक भारले डिप्रेशनमा पुगेँ’
‘आर्थिक भारले डिप्रेशनमा पुगेँ’
काठमाडौं । गायक सिडी विजय अधिकारीले गीतसंगीतमा आफ्नो व्यस्तता बढ्न थालेपछि एक करोडभन्दा बढीको घर किन्ने आँट गर्नुभयो । सुरुमा ऋणमै किने पनि विस्तारै किस्ता तिरौंला भन्ने सोचले केही वर्षअघि १५ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने योजनामा काठमाडौंको अनामनगरमा घर किन्नुभयो । श्रीमती गायन क्षेत्रमै र आफू पनि दिनप्रतिदिन व्यस्त हुँदै गएपछि आँट गर्नुभएको थियो ।
गाउँमा भएको घरजग्गा बैंकमा राखेर ४५ लाख र अर्को एक करोडको लगानीमा किनेको घर अहिले विजयलाई बेचौं या के गरौं भन्ने दोधारे मन भएको छ । ऋण विस्तारै तिर्न सकिएला भन्ने आँटलाई पछिल्लो समय उहाँको जीवनमा आइपरेका दुःखले जित्दै गएको छ । द भ्वाइसजस्तो ठूलो गायन रियालिटी सोको पहिलो सिजनको विजेता हुँदा अब त ऋणमुक्त भइने भइयो भन्ने खुशी अझै आउन सकेको छैन । त्यसमाथि श्रीमती बिरामी हुँदा अर्को ३५ लाख खर्च हुँदा विजय झन् तनावमा हुनुहुन्छ ।
यसैबीच गायक सिडी विजय अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग आफ्नो गीतसंगीतको यात्रा, द भ्याइसको विजेता भएपछिको खुशी र तनावसँगै जीवनबारे केही अन्तरंग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
द भ्वाइसको टिमले निर्माण गरेको पहिलो गीत बल्ल सार्वजनिक भएको रहेछ, ढिलो भएन र ?
द भ्वाइसको पहिलो सिजन सकिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो तर टिमले म विजेता भएसँगै २० लाख बराबरको म्युजिक भिडियो निर्माण गर्ने भनेको थियो तर खै किन ढिलो भयो त्यो त मैले पूरा भन्न नसकूँला । द भ्वाइसको टिमले हुन्छ हुन्छमात्र भन्नुहुन्छ । यही साता बल्ल अफिसियल पहिलो गीत ‘भुलभुलैया’ सार्वजनिक भएको छ । गीत मीठो छ त्यसैले दर्शक तथा श्रोताले माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ ।
द भ्वाइसले विजेतालाई दिने पुरस्कारमा तपाइँलाई अझै पनि पुरा पुरस्कार दिएको छैन रे । के पाउन बाँकी छ अब ?
मैले पुरस्कारको विषयमा धेरै पटक बिन्ती गरेको छु । विशेषगरी म व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक स्थिति कमजोर थियो । विजेता भएकै बेला द भ्वाइसको टिमलाई भनेको थिएँ । मलाई अप्ठ्यारो छ छिट्टै गर्दिनुहोला । उहाँहरूले एक हप्तामै हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । धेरैपछि पाउनुपर्ने नगद त दिनुभयो तर कार बाँकी छ । कार पाउन अझै कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन ।
तपाइँको पछिल्लो दुई महिना अस्पतालको बसाइ भयो । गीतसंगीतमै ब्रेक लाग्ने डर थियो ?
हो, श्रीमती सुष्मा राईको स्वास्थ्य स्थिति निकै बिग्रिएको थियो । एक दीर्घरोग भएकाले छिट्टै निको हुने नदेखिएपछि हामी करिब दुई महिना भारतमा उपचारका लागि अस्पतालको बसाइ भयो । गीतसंगीतमा एक किसिमको उचाइ भइरहेको बेला दुई महिना ब्रेक लाग्दा पछिलाई असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अहिले घरमै छौं । समय–समयमा केएमसी अस्पतालमा चेकअपमा लैजानुपर्छ ।
अहिले गीत रेकर्डको काम कति भइरहेका छन् ?
अहिले भने एकदम व्यस्त बनाएको छ । पछिल्लो समय गीतहरू बजारमा आइरहेको र प्रतिक्रिया पनि राम्रो आइरहेको छ । दिनहुँजसो एक गीत रेकर्ड भइरहेको छ । केही समय लकडाउनमा खाली भइयो तर लकडाउन सकिएपछि ब्यस्त भएको छु । यो महिना करिब ३० वटा गीत रेकर्ड हुन्छ । मलाई यो क्षेत्रमा माया गर्नुहुने अग्रह स्रष्टाहरूका कारण पनि अहिले व्यस्त भइरहेको छु । त्यसैले खुशी छु ।
कोरोनाको असरले आर्थिक भार कत्तिको परेको छ ?
मेरो जीवनमा यसै पनि पहिलेदेखि नै आर्थिक भार थियो । अहिले केहि थप त पक्कै भयो । अझैपनि घर ऋण मै छ । गाउँबाट ४५ लाख र यता १ करोडको ऋणमा जनतन घर किनेँ । त्यो समयमा गीतसंगीतको व्यस्तता हेरेर आँट गरियो तर पछि जीवनमा अनेक बज्रपात आउँदा निकै समस्या पनि बनायो । द भ्वाइसबाट भनेको समयमा पुरस्कार नपाउने, श्रीमती बिरामी हुने, यसले आर्थिक भारत परेको छ । यो बीचमा श्रीमतीको उपचारका लागि धेरैले आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति आभारी छु । दुःखमा यसरी साथ दिनु मेरो लागि भगवान बनेर आउनु भएको छ । श्रीमती बिरामी हुँदा करिब ३५ लाख खर्च भयो त्यसमा धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ । सबै सहयोगी मनको नाम सुरक्षित राखेको छु ।
आर्थिक भारले डिप्रेशनमा पनि जानु भएको हो ?
मलाई सबैतिरबाट एकदमै तनाव भयो । घरको ऋणको कुरा छँदै थियो । श्रीमती बिरामी भएपछि थप चिन्ता बढ्यो । आर्थिक भारतको खाडलभित्र पुग्दा म डिप्रेशनमा गएको थिएँ । द भ्वाइसले दिन बाँकी रहेको पुरस्कार दिन बारबार आग्रह गरेँ । आफैंले आफैंलाई चिन्न सक्दिन होला, मैले आत्महत्या पनि गर्नसक्छु भनेर जनाएको थिएँ तर द भ्वाइसको टिमले मेरो कुरा सुनेन ।
तपाइँहरू श्रीमान्–श्रीमती नै गायक गायिका हुनुहुन्छ अबसँगै गाएको गीत दर्शक तथा श्रोताले कहिले हेर्न र सुन्न पाउनुहुन्छ ?
अब त्यो पनि छिट्टै पूरा हुन्छ । हामीले तयारी गर्दैछौं । अबको एक महिनाभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं । अस्पतालमा बस्दा मैले गीत लेखेको थिएँ, त्यही गीत पनि रेकर्ड गर्ने तयारीमा छौं । यस्तै इजरायलमा हुने सुमन कार्की दाइले लेखेको शब्दमा अर्को गीत पनि रेकर्ड गर्ने तयारीमा छौं । छिट्टै दुईवटा गीत दुवैजनाको स्वरमा ल्याउने तयारीमा छौं ।
अघिल्लो लेख चाडपर्वले सामाजिक एकता कायम गर्छ: मुख्यमन्त्री गुरुङ
पछिल्लो लेख बेलारुसमा प्रदर्शनकारी र दंगा प्रहरीबीच भिडन्त
अमिर लोप्चनको “च्योक लाई म्हान्जि” बोलको सेलो गित सार्वजनिक।
नेपाल फिल्म सोसाईटीको युके शाखा गठन
निर्मात्री बन्ने तयारीमा आँचल